के कोजी हिरो बन्लान त ???
Search...	के कोजी हिरो बन्लान त ???
Published on Tuesday, 21 February 2017 08:24	Written by Super User	Tweet
नेपालले एएफसी सोलिडारिटी कप जित्दा त्यो जापानी प्रशिक्षक ग्यातोकु कोजीको पहिलो ठूलो प्रतियोगिता थियो । उक्त प्रतियोगिताको केही समय अघि मात्र उनी नेपाली राष्ट्रिय टिम सम्हाल्न काठमाडौं आएका थिए । त्यसैले उनले सोलिडारिटी कपमा टिम छान्ने मामिलामा त्यति प्रयोग गर्न भ्याएनन् । त्यति बेला टिम छनौटमा उनको एउटै आधार थियो, बंगबन्धु गोल्डकप र दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को पुरुष फुटबल स्पर्धा ।
सोलिडारिटी कपयता कोजुले टिम छनौटका लागि पर्याप्त समय पाएका छन् र यसक्रममा उनी एक खालको प्रयोग गर्ने मनसायमा देखिन्छन् । धेरैले कमजोर टिमको प्रतियोगिता भनेर हेप्ने सोलिडारिटी कप जितेपछि भने नेपाली फुटबलको भाग्य खुलेको छ । यस क्रममा राष्ट्रिय टिमले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चुनौतीको सामना गर्दैछ र यो प्रतियोगिता हो, एसियाकप छनौट । यो कोजुका लागि राष्ट्रिय टिमलाई एउटा ठोस स्वरूप दिने अवसर पनि हुनेछ ।
छनौटमा नेपालको समूहमा फिलिपिन्स, यमन र ताजाकिस्तान छन् । जसमध्ये नेपालको पहिलो खेल फिलिपिन्सविरुद्ध छ र अहिले यसैका लागि प्रशिक्षक कोजुले राष्ट्रिय टिमको तयारी सुरु गरेका छन् । पहिलो चरणमा उनले ३६ जना खेलाडीलाई प्रशिक्षणमा बोलाएका छन् । त्यसमा २३ खेलाडी सोलिडारिटी कप जितेको टिमकै छन् । बाँकी १३ मध्ये केही टिममा पुनरागमन रच्ने प्रयासमा छन् भने केही नयाँ खेलाडी छन् । लिगसँगै अरू प्रमुख प्रतियोगिता हुन नसक्दा नेपाली फुटबलमा नयाँ खेलाडीको प्रवेशको बाटो बन्द भैरहेको थियो ।
यस्तोमा मोफसलमा सञ्चालित प्रतियोगिताहरूले यो अवसर तयार पारेका छन् र त्यसले यी प्रतियोगिताको महत्त्व स्थापित गरेको छ । अर्कातर्फ नेपाली राष्ट्रिय टिम फेरि एकपल्ट परिवर्तनको सँघारमा छ । टिमका केही प्रमुख खेलाडी संन्यास लिनुपर्ने स्थितिमा पुगेका छन् । उनीहरूको विकल्प तयार पार्न पनि कोजुले केही ठोस निर्णय गर्ने समय आएको छ ।
यसै साता सुरु भएको प्रशिक्षणमा मनाङ–मस्र्याङ्दीसँग आबद्ध केही खेलाडी पछि मात्र समावेश हुनेछन्, किनभने मनाङ सेख कमल इन्टरनेसनल क्लब कप खेल्न बंगलादेश जाँदैछ । यता प्रशिक्षक कोजु भने पछिल्लो केही दिन मोफसलमा थिए, विशेषत: आहा गोल्डकप र झापा गोल्डकप हेर्न । यी दुवै प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने एक खेलाडी थिए, कर्ण लिम्बू । कर्णको खेलबाट प्रभावित भएर कोजुले उनलाई प्रशिक्षणमा बोलाएका छन् । कर्ण प्रशिक्षणमा परेर पनि अन्तिम समयमा छनौटमा नपर्ने दुर्भाग्यशाली खेलाडी रहँदै आएका छन् ।
कर्ण घरेलु फुटबलका राम्रा फरवार्ड भए पनि नेपालका तर्फबाट खेल्ने अवसर उनले विरलै मात्र पाएका छन् । चोटबाट मुक्त हुँदै डिफेन्डर रोहित चन्द पनि राष्ट्रिय टिममा फर्कने प्रयासमा छन् । मिडफिल्डमा पनि भूमिका निर्वाह गरेका रोहित नेपाल विजयी रहेका पछिल्ला तीनवटै प्रतियोगितामा थिएनन् । उनको अनुपस्थितिमा पनि नेपाली डिफेन्सले टिमको भार थामेको अर्थमा रोहितका लागि फेरि आफ्नो पुरानो ठाउँ खोज्नु चुनौतीपूर्ण नै हुनेछ ।
सोलिडारिटी कप खेलेको टिमबाहेक प्रशिक्षणमा प्रवेश पाएका अरू खेलाडीमा एलेन न्यौपाने, युवराज खड्का, रवि पासवान, विश्व अधिकारी, विमल पाण्डे, सुनिल बल, जितेन्द्र कार्की, मानबहादुर तामाङ, दिनेश राजवंशी, हेमन्त थापामगर तथा विमल बस्नेत छन् । यसमध्ये एलेन र हेमन्त राष्ट्रिय टिममा परेर पनि डेब्यु गर्न बाँकी खेलाडी हुन् । युवराज, रवि, विश्व र दुई विमलले भने पहिलोपल्ट राष्ट्रिय टिमका लागि प्रशिक्षणमा अवसर पाएका हुन् । -कान्तिपुरTweetShare0Facebook Social Comments	Skip to content